Linux 5.8: iyo hombe vhezheni yenguva dzese | Linux Vakapindwa muropa
Linus Torvals akaibhabhatidza nenzira iyo, Linux vhezheni 5.8 kernel ichave yakakurisa nguva dzese. Iri basa risingapfuure kubva kune vanogadzira iro rinozoguma nekusunungurwa kukuru mushure mezvino 5.7. Naizvozvo, ichave iri pamberi uye mushure mekusimudzira, uye iyo monstrosity inoratidza kuti ichatakurwa nenhau.
Hapana asi vhiki mbiri mushure meLinux 5.7Linux 5.8 irikugadziridzwa neyekutanga RC (Sunungura Vanokwikwidza) iyo inosvika kuzoyedza iyo ichave yekupedzisira vhezheni. Sekureva kwaLinus, zvinogona kunge zvichienderana neshanduro yeLinux 4.9, imwe yeakakura munhoroondo yekusimudzira nekubatanidza mabasa matsva nekuvandudza muzvinhu zvese, masisitimu, madhiraivha, zvinyorwa, nezvimwe.
Linux 4.9 yaive hombe nekuda kweiyo greybus subsystem iyo yakabatanidzwa mune iyo vhezheni. Iyo projekiti yakatanga kugadzirwa neGoogle pasi peiyo Ara chirongwa chemafoni nhare, asi yakazoshandiswa kupfuura iyo yeIoT kunyorera uye, nekudaro, yakasanganiswa nekernel.
Kune rimwe divi, muLinux 5.8 hapana yakadaro masystem system, saka, saizi inouya ne huwandu hwekuvandudza uye zviitiko kuti kune materu ekuwedzera munzvimbo dzakasiyana. Muchokwadi, Linux 5.8 yakagamuchira pamusoro pe14k commits uye mamwe mazana mazana masere emitsara mitsetse yekodhi, pamwe ne800k mafaera akagadziridzwa
Uye 14.000 akagadziridzwa mafaera uye 800.000 mitsara yekodhi kodhi kune akawanda ... Kunze kwezvo, zvese zvinogoverwa zvakanyanya sezvandataura. Chinhu chega chikuru ndechevatyairi kana vatongi maatomu uye habanalabs. Asi kunze kweizvozvo, hapana chinoenzanisa ne greybus.
Tichaona kuti Linux 5.8 inozotarisa sei painotanga pakutanga kwaNyamavhuvhu, pazvinenge zvarongwa (kana pasina kunonoka). Panguva ino, unogona kuedza yekutanga rc1 kurodha pasi kubva pano, asi kungo kuyedza, hazvikurudzirwe kushandisa rc pane michina yekugadzira ... sezvo isina kupwanywa zvachose uye inogona kukonzera mamwe matambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Linux 5.8: iyo hombe vhezheni yenguva dzese